Samsung Galaxy S21: leaked mbụ benchmarks | Gam akporosis
Ọ dị ọnwa ole na ole ruo mgbe ọhụụ ọhụrụ nke Samsung Galaxy S ezinụlọ hụrụ ìhè. A na-atụ anya na ọnụnọ ọhụrụ a ga-eweta na February ma ọ bụ Machị, anyị anatalarị nkọwa mbụ nke ọnụ. Anyị maara nke ahụ nwere ike itinye Pen, ma e wezụga ịbụ ụdị mbụ nke ika nwere igwefoto n'okpuru ihuenyo. Ugbu a, anyị chọrọ igosi gị ya mbụ benchmarks nke Samsung Galaxy S21.
Ma ọ bụ na, a arụmọrụ arụmọrụ nke ngwaọrụ nwere akara nlereanya SM-G996B nke yikarịrị ka ọ na-ezo aka na Samsung Galaxy S21. Ihe nhazi gị ga - abụ Exynos 1000.
Nke a ga-abụ ike nke Samsung Galaxy S21
Dị ka ị pụrụ ịhụ, anyị na-eche ihu na Exynos 2100 motherboard nke ga-enwe ihe nhazi asatọ, nke nwere ike bụrụ Exynos 1000. Anyị na-ahụkwa na ọ na-enye ihe ndabere nke 2.21GHz ma jikọta ya na 8GB RAM n'ezie enwere ntọala dị iche iche maka Samsung Galaxy S21.
N'aka nke ọzọ, anyị na-ahụ na Samsung Galaxy S21 ga-arụ ọrụ na Android 11, ọ bụ ezie na a ga-atụ anya ya. Laghachi ike nke Exynos 1000 processor, site na ule nke arụmọrụ bipụtara anyị na-ahụ ihe ịtụnanya: ọ na-enye arụmọrụ yiri ya na Snapdragon 865 +.
Otutu n’ihi na Samsung Galaxy S21 enwetala akara 1.038 na otu-core ule na 3.060 isi na multi-isi ule. Cheta na Galaxy Note 20 Ultra na Snapdragon 865 + SoC na-enweta akara nha 960 / 3,050 na nyocha otu-multi / multi-core.
Ekwesiri ighota na ihe omuma a nwalere gha aghaghi ibu ihe ngosiputa na nchekwa zuru oke, ya mere, anyi gha echere ichere inwe uzo ikpeazu ima ezi oru nke processor ga-ebugo Samsung Galaxy S21. Ma, site na ihe anyị hụgoro, ọ na-arụtụ aka n'ụzọ iji bụrụ ụzọ ọzọ nwere ike isi nweta ihe ngwọta Qualcomm.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Wuchara ihe mbido mbụ nke Samsung Galaxy S21
Esi hazie interface igodo Waze